Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Hawaii waxay macsalaamaysay COVID-19
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Jabinta Hawaii • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wtn
Iyadoo Badhasaabka Hawaii Ige uu ku dhawaaqayo qaadista inta badan xannibaadaha degdegga ah ee meesha laga bilaabo Diseembar, maaskaro muxaafid ah iyo xeerarka badbaadada safarka ayaa sii ahaan doona.
Si kastaba ha ahaatee warshadaha kulanka ayaa loo ogolaan doonaa inay dib u furmaan.
Go'aanka xannibaadaha ayaa ka gudbi doona Gobolka una gudbi doona gobollada Jasiiradda.
Iyadoo la raacayo isbeddelka qaranka ee Maraykanka, the Aloha Gobolka Hawaii sidoo kale wuxuu ku dhawaaqayaa in COVID-19 aanu hadda ahayn khatar halis ah.
Dalxiiska waa in uu sii socdaa oo uu balaadhiyaa. Isbeddelka ugu horreeya ee ganacsigu waa war soo dhaweyn ah, gaar ahaan warshadaha MICE ee Gobolka, sida hudheelada leh meelaha shirarka, xarunta shirarka, iyo goobaha shirarka.
In kasta oo kani uu war degdeg ah u yahay dalxiiska, haddana dadka qaar ayaa ka walaacsan in ugu dambayntii ay dib u dhacdo, in kasta oo ay mas’uuliyiintu bayaankooda soo saareen, xeerarka dib u furista ayaa halkaas joogi doona. Dawladdu waxay rajaynaysaa in dammaanad qaadkan uu soo celiyo kalsoonida qaybta.
Hawaii waxay sheeganeysaa inay haysato tiro aad u sareysa oo dad ah oo la tallaalay iyadoo la iska indha tiray in qaar badan oo ka tallaalay Gobolka deggan meelo kale (gudaha ama dibadda) ay heleen tallaalkooda Hawaii waxaana hadda lagu tiriyaa inay ka mid yihiin 1.4 milyan oo deggan Hawaii - waxa aan run ahayn. .
eTurboNews Su'aashan ayaa marar badan la waydiiyay, waxaana jawaab cad ka gaabsaday Guddoomiyaha Gobolka, Badhasaabada iyo HTA.
In kasta oo heerka dhimashadu aanu jilicsanayn inkasta oo tallaalka, iyo heerarka caabuqu ay si dhexdhexaad ah u socdaan, Hawaii waxay raacdaa isbeddel qaran oo ah in la iska indho tiro tirooyinkan si loo soo celiyo ganacsiga.
Hawaii Guddoomiye David Ige ayaa maanta ku biiray Maayarada Hawaii isagoo ku dhawaaqay qaadista xayiraadaha badan ee masiibada 1-da Diseembar, taasoo muujineysa in Hawaii ay mar kale u furan tahay ganacsi.
Badhasaabada Gobolka Island waxay awood u yeelan doonaan inay dejiyaan xeerarkooda degdega ah iyaga oo aan ogolaansho hore ka helin Guddoomiyaha
Xeerarka badbaadada ee soo socda ayaa ahaan doona.
Barnaamijka Safarrada Badbaadada ah ee Hawai'i, oo u baahan baaritaanno socdaalayaasha aan la tallaalin.
Waajibka waji-xidhka gudaha;
Shuruudaha tallaalka ama tijaabada ee maamulka gobolka iyo shaqaalaha degmada; iyo
Shuruudaha tallaalka ama tijaabinta qandaraaslayaasha iyo booqdayaasha xarumaha gobolka.
Talaabooyinkani waxay u adeegaan inay dib u soo nooleeyaan warshadeena soo-booqdaha wakhtiga ku haboon, iyadoo heerka talaalka gobolkeenu uu ka mid yahay kuwa ugu sareeya qaranka, oo ay weheliso ilaalinta caafimaadka ee socotada gudaha ee looga baahan yahay barnaamijka Safarrada Badbaadada ah ee Hawaii. Xayiraadaha federaaliga ah ee wax laga beddelay ee imaatinka caalamiga ah iyo sii wadida waajibaadka waji-xidhka gudaha ee Hawaii ayaa bixiya ilaalin dheeri ah, "ayuu yiri Madaxweynaha Maamulka Dalxiiska ee Hawaii (HTA) iyo Madaxa Fulinta John De Fries.
Marka lagu daro ku dhawaaqista maanta ee Gudoomiyaha, Duqa Magaalada Honolulu Rick Blangiardi wuxuu ku dhawaaqay kor u qaadista xaddidaadaha awoodda iyo shuruudaha fogeynta bulshada ee dhacdooyinka Oahu, fure u ah dib u bilaabista shirarka iyo shirarka Xarunta Shirarka Hawaii iyo guryaha dalxiiska ee kala duwan.